धनीको गोठ जोगाउने, गरिबको घरै भत्काउने ! | चितवन पोष्ट दैनिक
धनीको गोठ जोगाउने, गरिबको घरै भत्काउने !
भरतपुर । भरतपुर–२१, पार्वतीपुरस्थित सकुमबासी टोलमा अहिले खानेपानी विस्तारको काम भइरहेको छ । सडकछेउबाट खानेपानी पाइप बिछ्याउने काम हुँदै थियो । पाइप बिछ्याउनका लागि खाल्डो खन्ने क्रममा पदमबहादुर अधिकारीको घर आयो ।
घरभन्दा दायाँबायाँ जग्गा खाली भए पनि वडाले घरभित्रबाटै पाइप बिछ्याउने काम थाल्यो । अधिकारीको घरको कोठाभित्र धमाधम खनेर पाइप बिछ्याउन तयार पारियो । जम्मा ५० सेमीमात्रै घर परेकोमा घरलाई छलेर लानुको सट्टा घरभित्रै सुरूङ खनेका फोटाहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् । ५० सेमी पाइप बङ्ग्याएर पनि लान सकिने विकल्प हुँदाहुँदै घर नै फोरेकोमा स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् । खानेपानी विस्तारमा पोलिथिन पाइप प्रयोग भएको छ ।
पदमबहादुरकी आमा ९५ वर्षकी छन् । आमा जन्मजात दृष्टिविहीन हुन् । छोरा पनि सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । ‘घरभित्रै सुरूङ बनाएर कस्तो काम हुन लागेछ भनी म त्यहाँ पुगेँ’, अधिवक्तासमेत रहेका स्थानीय नारायण गिरीले भने, ‘मानवीय संवेदना नै हराएको देख्दा दुःख लाग्यो ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले संरक्षण र विशेष हेरचाह गर्नुपर्नेमा विकासको नाममा झनै पीडित बनाएको देखेपछि आफूले जनप्रतिनिधिसमक्ष कुरा लगेको अधिवक्ता गिरीले बताए । ‘दायाँबायाँ खाली जग्गा हुँदाहुँदै पनि किन घर नै भत्काएर लानुपर्‍यो ?’, अधिवक्ता गिरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सिंहदरबारमात्रै नभएर गाउँका शासकहरु पनि अन्धा हुँदा रहेछन् ।’
तर, वडा अध्यक्ष भन्छन्– भरतपुर–२१ का वडा अध्यक्ष चित्रसेन अधिकारी आफैँ संयोजक रहेको पार्वतीपुर खानेपानी आयोजनाले अहिले पाइप विस्तारको काम धमाधम गरिरहेको छ । वडा अध्यक्ष अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा घरमै सुरूङ खनेको विषय सार्वजनिक भएपछि आफूले चासो दिएको बताए ।
आइतबारको यस घटनामा बेलुका घरका पीडित व्यक्तिहरुसँग भेट हुँदा आफूहरुले सहमतिमै खन्न दिएको भनेकोमा घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको वडा अध्यक्ष अधिकारीले बताए । सडक क्षेत्र छलेर लैजाँदाखेरि घर परेको उनले बताए ।
राजनीतिक दल अनुगमन समिति र जनप्रतिनिधिको बैठक राखेर यस विषयमा छलफल गरिने उनले बताए । ‘म पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन्नँ, तर अरु स्थानमा समस्या नहुने त्यहीँ समस्या हुने भन्ने विषयमा राजनीतीकरण गर्न खोजिएको हो’, उनले भने ।
केन्द्रीय बजेटबाट पार्वतीपुर खानेपानी आयोजनाको काम भइरहेको छ । हालसम्म ५ सय धारा वितरण भएको र ५० किमी पाइप विस्तार गरिने वडा अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । दसैँसम्ममा आयोजना सक्ने गरी धमाधम काम भएको उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो लेखमाबागमतीको बजेट : ५१ अर्ब बढी, चितवनमा परे १० ठूला कार्यक्रम
अर्को लेखमाक्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको चाप बढ्दै